Outlook Password ကိုမေ့သွားတယ်။ Lost Outlook Password ကို။ Outlook Password ကိုပြန်လည်ထူထောင်ရေး။
ပင်မစာမျက်နှာ ထုတ်ကုန်များ DataNumen Outlook Repair encrypt လုပ်ထားသော PST ဖိုင်အတွက်စကားဝှက်ကိုမေ့သို့မဟုတ်ဆုံးရှုံးပါ။
လျှို့ဝှက်နံပါတ်မေ့သွားပါသလား? DataNumen Outlook Repair ကူညီနိုင်!
Outlook Password ကာကွယ်ခြင်း:
Outlook တွင် Personal Folders (PST) ဖိုင်အသစ်တစ်ခုဖန်တီးသောအခါ၊ ၎င်းကိုလျှို့ဝှက်နံပါတ်ဖြင့် encrypt လုပ်နိုင်သည်။
encryption settings သုံးခုရှိပါတယ်:
encryption မ။ ဆိုလိုသည်မှာသင်သည်ဖိုင်ကိုစာဝှက်မထားဘူးဟုဆိုလိုသည်။
ချုံ့နိုင်သောစာဝှက်စနစ်။ ဒါကပုံမှန် setting ဖြစ်ပါတယ်။
High Encryption (Outlook 2003 နှင့်ပိုမိုမြင့်မားသောဗားရှင်းများအတွက်) သို့မဟုတ်အကောင်းဆုံး Encryption (Outlook 2002 နှင့်အနိမ့်ဗားရှင်းများအတွက်) ဟုခေါ်တွင်သည်။ ဒီ setting ကိုမီတာရှိပါတယ်ost လုံခြုံရေး။
အကယ်လို့ compressible encryption (သို့) high encryption (အကောင်းဆုံး encryption) တစ်ခုခုကိုရွေးပြီးအောက်ကစကားဝှက်ကိုသတ်မှတ်လိုက်ရင်၊ PST ဖိုင်ကိုအဲဒီစကားဝှက်နဲ့ကာကွယ်ထားလိမ့်မယ်။
ထို PST ဖိုင်ကို Outlook ဖြင့်ဖွင့်ရန်သို့မဟုတ်ဖွင့်ရန်ကြိုးစားသည့်အခါနောင်တွင်ထိုစကားဝှက်ကိုရိုက်ထည့်ရန်သတိပေးလိမ့်မည်။
အကယ်၍ သင်ဟာစကားဝှက်ကိုမေ့သွားတယ်၊ ဆုံးရှုံးသွားရင် (သို့) စကားဝှက်ကိုလုံးဝမသိဘူးဆိုရင်၊ ငါတို့ထုတ်ကုန်ကိုအသုံးမပြုပဲ PST ဖိုင်ကိုသာမက၊ အီးမေးလ်များနှင့်၎င်းမှာသိမ်းထားတဲ့အခြားအရာများကိုမရရှိနိုင်ပါ။ DataNumen Outlook Repairဒီပြtheနာကိုလေပြေတစ်ခုလိုဖြေရှင်းနိုင်တယ်၊
ပြန်လည်ပြင်ဆင်ရမည့်အရင်းအမြစ် PST ဖိုင်အဖြစ်စာဝှက်ထားသော Outlook PST ဖိုင်ကိုရွေးချယ်ပါ။
encrypted Outlook PST ဖိုင်ကိုပြင်ပါ။ DataNumen Outlook Repair မူရင်း encrypt လုပ်ထားသော PST ဖိုင်ရှိအချက်အလက်များကိုစာဝှက်ဖြည်ပြီး၎င်းကိုသတ်မှတ်ထားသော PST ဖိုင်အသစ်သို့ရွှေ့ပြောင်းပါလိမ့်မည်။
ပြန်လည်ပြုပြင်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်အပြီးတွင် Outlook ကို သုံး၍ ပုံသေ PST ဖိုင်ကိုဖွင့်နိုင်သည်။ စကားဝှက်လည်းမလိုအပ်တော့ပါ။
လျှို့ဝှက်နံပါတ်မေ့သွားသည့်စာဝှက်ထားတဲ့ PST ဖိုင်နမူနာ။ Outlook_enc.pst
ဖိုင်မှပြန်လည်ရယူသည် DataNumen Outlook Repairစကားဝှက်မလိုအပ်တော့ပါ။ Outlook_enc_fixed.pst